Jose Mourinho Oo Ku Xanaaqay Shaqaalihiisa Caafimaadka Ka Dib Barbarihii Ay La Galeen Swansea City. – STAR FM SOMALIA
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa ku eedeeyay shaqaalaha caafimaadka kooxdiisa inay Eden Hazard daweeyn ugu soo carareen intii ay socotay kulankii ay barbaraha la galeen Swansea City.
Kooxda Blues oo casaan laga siiyay goolhaye Thibaut Courtois ayaa sagaal ciyaaryahan noqday in muddo ah ka dib mar markii shaqaalaha caafimaadka ay daweeyeen Hazard inkastoo uu u muuqday mid aan dhaawac xun soo gaarin
Haddii ciyaaryahan ii daweyn ka helo shaqaalaha caafimaad, waxaa ku qasab ah inuu garoonka ka baxo, taasoo ka dhigtay Chelsea in muddo ah inay sagaal ciyaaryahan ku ciyaaraan, waana waxa ka careysiiyay Jose Mourinho.
“Kuma faraxsaneyn shaqaalaheyga caafimaadka. Waxa ay ahaayeen kuwa sal fudud oo aan caqli laheyn” ayuu Mourinho u sheegay Sky Sports.
“Haddii aad tahay ninka maaliyadaha madaxda ka ah, dhakhtar ama qofka kala agaasima kursiga keydka waxaad ku qasban tahay inaad fahamto ciyaarta.
“Waa inaad ogataa in durbaba ciyaaryahan kaa maqan yahay, waana inaad ogaataa marka aad caawineyso ciyaaryahan inuu dhaawac halis ah soo gaaray. Waan hubay Eden wax dhibaato weyn ah ma uusan qabin. Jug ayaa soo gaartay wuuna daalanaa.”